Home Ulo oru Europe Manuel Neuer Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-enye Full Story of a Football Stopper kasị mara aha na aha njirimara; "Snapper". Ụmụaka Neuer nke Manuel anyị Akụkọ na Akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Akụkọ eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ihe mgbaru ọsọ ya ịkwụsị ikike ma ole na ole nyochaa Manuel Neuer Bio nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Manuel Neuer nke nwata akụkọ akụkọ na -Ndụ mbido
Manuel Peter Neuer a mụrụ na 27 March 1986 na Gelsenkirchen, North Rhine-Westphalia, Germany.
A mụrụ ya na nne ya, Marita Neuer na nna, Peter Neuer. A zụlitere Manuel na ụlọ Katọlik na ọ bụ onye dị mpako nke Chọọchị Katọlik nke Gelsenkirchen.
Ọ gara Gesamtschule Berger Feld, dịka ọtụtụ ndị ọzọ na-agba ọsọ ụkwụ, dị ka Mesut Özil. Neuer nwere egwuregwu mbụ ya mgbe ọ dị afọ abụọ ma nwee egwuregwu mbụ ya na 3 March 1991, 24 ụbọchị tupu ụbọchị ise nke ọmụmụ ya. Ọ tolitere na-amụta site na dike ya na arụsị, German ibe ya na onye bụbu onye nchebe Schalke Jens Lehmann.
N'obodo nke obodo ha, Manuel na nwanne ya nwoke na-egwuri egwu kwa ụbọchị ruo ọtụtụ awa ma na-eleghara ọmụmụ ihe ha anya. Ka ọ na-etolite, mmasị o nwere n'egwuregwu ahụ akwụsịghị, ọ hụkwara na ya debara aha na Gesamtschule Berger Fled youth football system. Ọ na-etolite na nchebe ha na-erughị otu afọ tupu Schalke 04 na-akpọ ya ka ọ bụrụ n'afọ 1991. Egwuregwu a Manuel nwere ohere izute arụsị ya na onye nlekọta mgbaru ọsọ Arsenal, Jens Lehmann.
Ka ọ na-egwuri egwu na Schalke, ọ na-eme ihe karịrị ihe ọ bụla mmadụ chọrọ. Ogologo oge, onye nchịkwa nke ụlọ ọrụ ahụ malitere ilebara aka Manuel na egwuregwu ya, ya mere, Manuel nọgidere na-enwe ọganihu na n'oge ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, ọ bụrịrị onye na-elekọta ụlọ ọrụ ọkachamara.
Ngwa ngwa na 1st June 2011, Schalke na Bayern Munich kwenyere na Neuer ga-aga Bayern na July 2011. Mbugharị a bara uru ka a na-akọ nde 22. Mgbe agha nke Bayern Fans megide Neuer (ụfọdụ Fans adịghị enwe obi ụtọ banyere Bayern na-azụ onye na-elekọta Schalke). Otu mkparịta ụka okpokoro n'etiti Bayern na otu ndị na - akwado ndị nnọchiteanya mere na 2 July 2011. Tinyere ihe ndị ọzọ, e kpebiri na Manuel Neuer ga-"dị ka onye zuru oke nke òtù FC Bayern Munich, onye a ga-emeso ya n'ụzọ nkwanye ùgwù.
Ọzọkwa, iro megide ya kwesịrị ịkwụsị ". N'oge na-adịghị anya Neuer malitere ịkọ akụkọ ndekọ Bayern Munich. O meriri ntaneti kachasị asọmpi n'ahịrị, mgbe ọ gafere 1,000 nkeji n'enweghị nkwado. Enye ama ọfọn ama ke ndek emi ẹkebede Oliver Kahn.
Manuel Neuer nke nwata akụkọ akụkọ na -Ndụ mmekọrịta
N'otu oge, o yiri ka Manuel Neuer ga-eme agadi na Kathrin Gilch (ihe nlereanya na onye na-edozi ákwà), ma mmekọrịta ha biri na 2014. N'okpuru ebe a bụ foto nke abụọ ahụ n'otu oge n'anya nnụnụ.
Na 2015 goalie maka otu ndị otu mba Germany wepụtara enyi nwanyị ọhụrụ ya bụ Nina Weiss mgbe ya kewara. Ugboro ugboro ya na ya na-aga n'ebe ọha na eze kwadoro mmekọrịta ha.
Manuel malitere iso Nina gaa na n'oge ọ ka lụrụ di na nwunye Kathrin Gilch, bụ onye ya na ya nọrọ kemgbe afọ ise. Mgbe o zutere Nina mma, Kathrin ka soro onye na-eche nche na Brazil maka World Championship. Ọbụna Kathrin dị n'otu n'ime obi ụtọ, Manuel chere na ọ nweghị onye ọ hụrụ n'anya. Echiche ya maka ya anọghị ebe ahụ dị ka ọ na-agbasi mbọ ike ka ya na ya nọrọ.
Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, ịhụnanya ha dị nnọọ njọ ma abụọ ahụ mebiri. Kathrin mara ọkwa n'ụzọ dị mma nke o nwere 'Onye Nwanna Neuer gbara alụkwaghịm' ma ihe niile ka ekwusiri n'ihu ọha. E kweghị ka Gilch nye nkọwa ọ bụla ọzọ, dịka ha, dịka Bild, kwadoro Manuel Neuer iji kwụọ ya ụgwọ ego kwa ọnwa iji chebe ya maka njedebe ha. Otú ọ dị, ọ dị nnọọ nnọọ ukwuu, na Nina Weiss keere òkè na njedebe nke alụmdi na nwunye ha.
Nwanyị nwanyị ọhụrụ Manuel, Nina ha si na Berlin ma na-amụ akwụkwọ na Ụlọ Akwụkwọ nke Economics na Iwu mgbe ọ zutere Neuer. Neuer maka oge mbụ ya na ọnụmacha mara mma Nina Weiss na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na ụlọ ahịa Aids Foundation, nke Nina nna ya bụ onye nde mmadụ.
A hụwo ịhụnanya ndị ahụ na mbụ, na ama mara FC Bayern Oktoberfest, ma ha adịbeghị njikere ikwado mmekọrịta ha n'oge ahụ. Ka o sina dị, ọ bụ onye na-eso ụzọ na-eguzosi ike n'ihe nke egwuregwu ya ma na-egbuke egbuke na-eguzo na ya ọchị ọchị.
Ndị enyi abụọ ahụ nwere agbamakwụkwọ buru ibu n'afọ 2017. Di na nwunye a na-enwe obi ụtọ na-ejikọta eriri na adriatic obodo Monopoli - nke dị n'ógbè Bari, Ịtali.
Otu ihe dị mkpa banyere agbamakwụkwọ ya bụ na onye nchebe German nọ na nkocha, n'oge agbamakwụkwọ ya na Nina. O nwere ụkwụ agbajiri n'oge ahụ. Ka o sina dị, Neuer bụ ihe osise nke obi ụtọ ka ya na Weiss rịọrọ maka ọnyà mgbe e mesịrị.
Ndị bịara ọmụmụ ihe ahụ bụ Mario Gotze, na-esote ya nlereanya ihe-enyi nwanyị Ann-Kathrin Brommel. Ọ na-ewute ya ịga agbamakwụkwọ nke onye ọ hụrụ n'anya. Ọtụtụ Fans nke Manuel na-enwe ekele maka ntozu Kathrin ma ka na-echeta echeta oge ụbọchị ịhụnanya ha dị ogologo dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a.
Manuel Neuer nke nwata akụkọ akụkọ na -Ndụ Ezinụlọ
Manuel Neuer si n'agbata ụlọ na-etiti na-aga n'ihu tupu a kwụọ ụgwọ ụlọ ọrụ football maka ya na ndị ọ hụrụ n'anya. Ọ na-enwe mmetụta dị nnọọ ka nna ya, Peter Neuer.
Nne ya, bụ Marita Neuer, dị n'okpuru ebe a na-ele anya karịa Pita di ya.
Ọ ka na-eju anya na ọtụtụ ndị fans ya amaghị nke a. Nwanna nwoke Manuel Neuer, Marcel bụ onye nchịkọta football n'elebe Verbandsliga, otu egwuregwu egwuregwu football nke atọ na usoro egwuregwu nke egwuregwu ndị Germany. N'okpuru bụ foto nke Manuel na nwanne ya dị nro, Marcel Neuer.
Neuer ga-akpachara anya ma ọ bụrụ na ya na nwanne ya nwoke Marcel na-egwu egwu na ọ bụ onye nchịkwa na German dị ala karị - Verbandsliga.
Manuel Neuer nke nwata akụkọ akụkọ na -Ndụ nke Onye
Manuel Neuer nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike nke Manuel Neuer: O nwere obi ike, kpebisie ike, nwee obi ike, ịnụ ọkụ n'obi, nchekwube, ikwesị ntụkwasị obi na obi ụtọ.
Ahụghị Manuel Neuer: O nwere ike inwe ndidi, obi ọkụ, onye dị mkpụmkpụ, onye na-enweghị isi na onye na-eme ihe ike.
Ihe Manuel Neuer nwere mmasị: Ọ hụrụ uwe dị mma, na-arụ ọrụ nduzi, ihe ịma aka na egwuregwu onye ọ bụla.
Ihe Manuel Neuer achọghị: Ọ na-enweghị mmasị na arụmọrụ, igbu oge na ọrụ ọbụla na-ejighị talent.
N'ikpeazụ, Manuel dị ike na ọgba aghara. Ọ hụrụ asọmpi ịbụ onye mbụ na ihe ọ bụla - site na ọrụ na nnọkọ ntụrụndụ.
Manuel Neuer nke nwata akụkọ akụkọ na -Egwuregwu Millionaire
Manuel Neuer na-emetụtakwa na ọ bụ nnukwu ama na Germany ma ozugbo ọ pụtara na 'Wer Wid Millionaire', nke bụ nsụgharị German 'Ònye chọrọ ịbụ onye Ndekọ'. Ọnụ ego o meriri na ọrụ ebere ahụ gara Manuel Neuer Kids Foundation.
Manuel Neuer nke nwata akụkọ akụkọ na -aha otutu
A kọwawo Neuer dị ka a "Onye na-ekpo ọkụ" n'ihi na ọ bụrụ na ọ na-agbapụ n'ahịrị ya iji hụ ndị iro; a makwaara ya maka ngwa ngwa ya na-agba ọsọ ọsọ, ọmarịcha mma-ịkwụsị ikike, ike, ogologo oge, iwu nke mpaghara ya na njikwa ziri ezi na nkesa nke bọl ahụ.
Manuel Neuer nke nwata akụkọ akụkọ na -Ya Hobbie
Ọ bụghị naanị football ka Neuer hụrụ n'anya. Manuel na-enwekwa skiing na tennis, nke ọ na-eme ruo mgbe ọ bụ 14 na onye na-egwu egwu na Tennis dị ukwuu Boris Becker. Egwuregwu egwuregwu kachasị amasị ya bụ Adidas.
Manuel Neuer nke nwata akụkọ akụkọ na -Charity
Neuer bụ ndị na-agba ama na obi ọlaedo ma nye onyinye dị ukwuu maka ọrụ ebere. Ọbụna o nwere ntọala nke ya bụ Manuel Neuer Kids Foundation bụ nke na-enyere ụmụaka aka na-atụghị anya na mpaghara Ruhr. Ntọala ahụ na-enyekwa ngwá egwuregwu iji kwere ndị na-eto eto na-eto eto na-enweghị ike ịzụta onwe ha.
Manuel Neuer nke nwata akụkọ akụkọ na -Nhọrọ Ya maka Idol
Germany nwere ndị na-eme ihe nchebe dịka Bodo Illigner na Oliver Kahn ma Neuers niile oge kachasị mmasị na-eche nche bụ mbụ Arsenal nwoke Jens Lehmann. Ọbụna ọ na-ewere onye ọlụlụ ya dị ka onye na-elekọta mgbaru ọsọ kachasị.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwukwo Manuel Neuer na nwata. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.